कोरोना महामारी र खोपको विश्व राजनीति – Nepal Press
२०७८ वैशाख २८ गते १४:३१
काठमाडौं । कोभिड-१९ को जीवाणुले विश्वभरिका देशलाई डस्न थालेको ठ्याक्कै डेढ वर्ष भयो । सन् २०२० को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको भनिएको यो विषाक्त जीवाणुले आजसम्म आइपुग्दा विश्व विचरण गरिसकेको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म यसको असरबाट विश्वका कुनाकाप्चाका ३२ लाखभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यस्तै अहिलेसम्म यसबाट विश्वका १५ करोडभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् ।
वर्षदिनपछि यो जीवाणुले नयाँ-नयाँ स्वरुप लिएको छ र दोस्रो या तेस्रो लहरका रुपमा कतिपय देशमा प्रवेश गरिरहेको छ । जस्तो कि केही समयअघि मात्र कोरोनाको नयाँ प्रजाति (युके भेरिएन्ट) जन्मिएको प्रमाणित भएको छ । यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा झन् बढी संक्रामक र घातक देखिएको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
यसको प्रवेश दोस्रो लहरका रुपमा भारतमा भएको छ जसले अहिले भारतसहित एसियाका कतिपय देशमा निकै गाह्रो बनाएको छ । पछिल्लो समयमा यो संक्रमण दोस्रो लहरका रुपमा सम्भवतः भारत हुँदै नेपाल पनि छिरेको छ । दोस्रो लहरका रुपमा आएको यो भाइरस अहिले नेपालमा पनि देशव्यापी रुपमा विस्तार भइरहेको देखिएको छ ।
कोभिड-१९ को खोपको आविश्वकार भएको केही महिनामै यसको वितरण बारेको चासो पनि विश्वव्यापी भएको छ । खोपको उपलब्धताप्रति विश्वका देशहरुका प्रयासहरु पनि बढ्दो छ । अनि नागरिकले एकापसमा सोध्ने गर्छन्– खोप लगाइयो ? मेरो पालो कहिले आउँछ ? कतिपय देशहरुले त आफ्ना सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने मिति नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केहीलाई यसको पहुँचमा नै अझै आशङ्का छ ।
यही मे ५ तारिखसम्म विश्वमा खोपको वितरण र यसको उपलब्धता १ अर्ब २३ करोड मात्रा भन्दा केही बढी मात्र देखिएको छ । यो संख्या मात्र विश्वका देशहरुमा खोप वितरण भएको बीबीसी समाचारले जनाएको छ । यो विश्वका देशहरुमा वितरण मात्र भएको तथ्याङ्क हो, तर मानिसले लगाएको तथ्याङ्क होइन । खोप लगाउने काम विश्वका प्रायः अधिकांश देशमा शुरु भइसकेको छ तर खोप लिने व्यक्तिको संख्या भने यतिधेरै छैन ।
खोपको मात्रालाई जनसङ्ख्यासँग तुलना गरेर हेर्दा विश्वमा सबैभन्दा बढी उपलब्ध बेलायतमा छ । त्यहाँ ५ करोड भन्दा बढी खोप उपलब्ध छ र यहाँको जनसंख्याका हिसाबले ७६ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकलाई लगाउन सहज हुनेछ । यसरी कतिपय पश्चिमा देशहरुले, विशेषगरी युरोपेली देशमा आफूलाई पुग्नेगरी खोपका मात्राहरु भण्डारण गरिराखेका भन्ने गरिएको छ । बेलायतको यो मात्रा हेर्दा त्यसमा विमती राख्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसो त कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रजातिले बेलायतलाई नै पछिल्लो समयमा असर पारेकोले पनि खोपको उत्पादनमा बेलायतले ध्यान दिएको पनि हुनसक्छ ।
खोपको आविस्कारले महामारीको अँध्यारोको वर्षदिनमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु बाहेकको अर्को विकल्प नरहेको अवस्थामा खोप आएकोले नागरिकमा केही आशाको सञ्चार गराउनु स्वभाविकै हो ।
तर खोप अझै पर्याप्त नभएको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ महामारी निवारणको काम खोपले गर्नसक्ने विश्वासिलो आधार छैन । हाल विश्वका कैयौ देशमा खोप पुगिसकेको छ तर यसले के प्रतिशतसम्म काम गर्छ भन्ने बारेमा भने फरक फरक तथ्याङ्क भेटिन्छन् । खोपको आविस्कार वैज्ञानिकहरुको बडो संघर्षपूर्ण प्रयासको एउटा परिणाम हो र यसले यो महामारीको औषधी पनि छ भन्ने सन्देश भने दिन सफल भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधनाम गेब्रियसले हाल देखा परिरहेको विश्वका देशहरु र कोभिड-१९ को खोपका सम्झौताहरुले अहिले तेस्रो विश्वका कतिपय गरिब देशहरुलाई समस्या पर्ने त होइन भन्ने चुनौती बढेको बताए । उनले भने ‘हाल संसारका देशहरु र कोभिडको खोप निर्माताका बीचमा जारी रहेका सम्झौताहरुले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ कि यसले गरिब देशहरुमा खोप उपलब्ध नहुन सक्ने त्रास बढाएको छ । तर खोप अहिलेको संसारका लागि मानिसको जीवन बचाउन सकिने एक आधारभूत आवश्यकता र मानवअधिकार पनि हो, त्यसैले यो खोप सबैका लागि उपलब्ध हुनु आवश्यक छ ।’
हाल संसारका कैयौं देशमा कोभिडको खोप पुगेको छ, मात्रामा भने थोरै धेरै हुनसक्छ । तीमध्ये धेरै त विश्वका सम्पन्न देशहरु नै पर्दछन् । अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने संसारमा पुगेको कोभिडको खोपमध्ये कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत खोप सम्पन्न देशहरुमा मात्र पुगेको छ । यो अवस्थाले विश्वका गरिब देशहरुको हालत भोलि के होला ? उनीहरुले आवश्यक र पर्याप्त मात्रामा खोप प्राप्त गर्न सक्लान कि नसक्लान ? भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
उनले भने ‘म कुनै देश या खोप निर्माता कम्पनीलाई भन्न चाहन्न, मलाई लाग्छ यो कुनै एक देशको मात्र प्रयासले हुने होइन, यो विश्वव्यापी पहलको परिणामले मात्र हुन्छ । जसरी विश्वका देश महामारीबाट प्रताडित भएको अवस्था थियो आज सबैले अरु देश या गरिब देशहरुलाई पनि आफूलाई जस्तै अप्ठेरो परेको होला भनेर सोचिदिनुपर्छ ।’
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २८ गते १४:३१
मुख्यमन्त्री पोखरेलको आग्रह- प्रदेशसभा दुर्घटनामा पर्न नदिन विश्वासको मत दिनुस्
आधिकारिकता दावी लिएर जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोग जाँदै
युवा संघद्वारा छोटो फिल्म प्रतिस्पर्धा आह्वान
मेलम्चीका बाढीपीडितलाई खेलकुद महासंघको सहयोग